မဿဲ 28: 1-20; မာကု 16: 1-20; လုကာ 24: 1-49; ယောဟန် 20: 1-21: 25 ။
ပြီးနောက် သညျယရှေု ခဲ့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေ , ရိမသဲမြို့သားယောသပ် ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမိမိသင်္ချိုင်းတွင်း၌ထားလေ၏ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကကြီးမားသောကျောက်ဝင်ပေါက်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်စစ်သားများအလုံပိတ်သင်္ချိုင်းစောင့်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌, အတော်ကြာအမျိုးသမီးတွေ (ကတနင်္ဂနွေ မာရိသညျဂဒလမာ ရိယာကုပျ, ဟန္နနှင့်ရှာလုံ၏မယ်တော်အားလုံးဧဝံဂေလိတရားကိုအကောင့်ထဲမှာဖျောပွထား) မှအရုဏ်မှာသင်္ချိုင်းသို့သွားကြ၏ ခန္ဓာကိုယ်လိမ်းသ ညျယရှေု၏။
ကောင်းကင်ဘုံမှလာသောကောင်းကင်တမန်သည်ကျောက်ကိုပြန်လှိမ့်အဖြစ်တစ်ဦးကအကြမ်းဖက်မြေငလျင်ရာအရပျကိုယူ။ အဆိုပါအစောင့်ကောင်းကင်တမန်အဖြစ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်, တောက်ပသောအဖြူရောင်ကိုဝတ်ဆင်, ကျောက်ကိုပေါ်မှာထိုင်နေ၏။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သောယေရှုကိုမရှိတော့သောမိန်းမတို့အားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကောငျးကငျတမနျ သင်ျခြိုငျး , " သူကပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ ဟုသူကပြောသည်နည်းတူ, ။ " ထိုအခါသူသည်သင်္ချိုင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကိုယ်အဘို့ကြည့်ဖို့မိန်းမတို့ညွှန်ကြားထား။
Next ကိုသူအကြောင်းကြားသွားကြဖို့သူတို့ကိုပြောပြသည် တပည့် ။ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအရောအနှောများနှင့်သူတို့ကောင်းကင်တမန်၏ command ကိုနာခံရန်အထဲသို့ပြေး ဝင်. , ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏လမ်းပေါ်သူတို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့ကခြေတော်ရင်း၌ဝပ်နှင့်သူ့ကိုကိုးကွယ်ကြ၏။
ယရှေုသညျပြီးနောက် "မကြောက်ပါနှင့်။ ဂါလိလဲပြည်သို့ သွား. ရန်ငါ့ညီအစ်ကိုတို့ကိုပြောပြသွားပါ။ အဲဒီမှာသူတို့သည်ငါ့ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ " ထိုသူတို့အားပြောဆို
သူ Emmaus ရန်လမ်းမပေါ်တွင်တပည့်နှစ်ယောက်တို့သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တပည့်ပေါင်းများစွာငါးမျှားစဉ်တွင်သူလည်းဂါလိလဲအိုင်မှာထင်ရှား၏။
လူအပေါင်းတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အမှန်တရားအပေါ်အရင်း။ ယရှေုသညျငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း, အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ "ဟုပြောသည်။
သူကသေစေခြင်းငှါသော်လည်း, သူသည်အသက်ရှင်လိမ့်မည်, ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်။ အကြင်သူသည်ငါ့ကိုတှငျနထေိုငျနှင့် ယုံကြည်. သေဆုံးဘယ်တော့မှမရကြလိမ့်မည် "(ယောဟန် 11: 25-26 ။ NKJV )
ဤအစဉ်းစားကြည့်ပါ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်ဘို့ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းရင်းများ ။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကောင့်ခရစ်တော်အနည်းဆုံး 12 ကွဲပြားခြားနားသောပွဲ, မာရိနှင့်အတူစတင်နှင့်ပေါလုနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကခရစ်တော်နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, မြင်သာထင်အတွေ့အကြုံများ, အစာစားစကားပြောမိမိနှင့်ထိမိခြင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်။
ယေရှုအသက်ပြန်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်သည်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမရှိတော့သဘောသဘာဝ၏တူညီသောဥပဒေများဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသော့ချထားသောတံခါးများလုပ်ဆောင်ရမှာတွေနိုင်ကြောင်းနှင့်သေးသူနေဆဲထိမိနိုင်သူကိုစားနိုင်ပါတယ်။
ယရှေုသညျခင်မှာ တက်ပြီ ကောင်းကင်သို့သူကိုပေး၏ ဂရိတ်ကော်မရှင် သွားနှင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့၏တပည့်ဖြစ်စေခြင်းငှါသူ၏နောက်လိုက်ပြောပြ။
ယရှေုသညျထှကျရနိုင်အောင်ပိတ်သောကျောက်သင်္ချိုင်းတော်မှပယ်ရှင်းပြီမခံခဲ့ရပါဘူး။ သူကသူ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနံရံများ (ယောဟန် 20:19) မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းကသူထမြောက်တော်မူသည်ကိုသိမြင်နိုင်အောင်ပိတ်သောကျောက်ကိုလှိမျ့ခဲ့သည်။
ယေရှုခရစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း Reflection များအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကို
ယရှေုသညျ Emmaus ဖို့လမ်းမကြီးပေါ်တွင်နှစ်ခုတပည့်တို့အားထင်ရှားတဲ့အခါသူတို့ (: 13-33 လုကာ 24) သူ့ကိုအသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကပင်ယေရှုအကြောင်းအကြီးအရှည်စကားပြော, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူ၏အလွန်ရှေ့မှောက်တွင်ရှိကြ၏မသိခဲ့ပါ။
တစ်ခုဟောငျးကမျြးစာအများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးရန်သင့်လျော် Way ကို
သင်မည်သို့ကောင်းကင်ဘုံမှ Get သလား?
ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုက်ရှိပါတယ် Get ဒါကခဲ့မည်သို့ - ဆိုက်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်?
တစ်ဦးကိုဘှားမွငျသင်ခန်းစာ Improve5ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ
အဆိုပါ 70 ၏ 10 အကောင်းဆုံးပေါ့ပ် Instruments
နာမည်ကြီးအဆိုတော်များအကြောင်း5စေ့ဆော်ကလေးစာအုပ်များ
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်မျက်နှာပြင် Pass ကို - အဓိပ္ပာယ်နှင့်ရှင်းလင်းချက်
တစ်ဦး cello ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီသိထားပါမှအမှုအရာ
ဘယ်လိုမြွေ Venom အလုပ်လုပ်ပါသလား
ယင်းတိုက်တန်းနစ်အကြောင်း 14 အံ့သြစရာအချက်အလက်
မေတ္တာတော်၌တည် Sagittarius: ရာသီခွင်လိုက်ဖက်
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာကိုးကားချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေးအတိတ်အကြောင်းကို Quotes ၏တစ်ဦးကငွေကောက်ခံ